8 Aktar Oo Neceb Aktarka Caanka Ah Salman Khan
Waa kuwaan liiska aktarada iyo fanaaniinta ay cadowga isku yihiin aktarka caanka ah ee Salman Khan.
1. Shahid Kapoor :- Colaadooda waxay soo bilaabatay markii Shahid iyo Salman ay bandhig caalami qabteen. Salman ayaa xanaaqay markii Shahid uu u soo jeediyay qaabab uu u qoob ciyaari karo. Salman ma uusan jecleysanin inuu talo ka helo aktarka ka yar ee Shahid. Tan iyo markaas Salman Khan waa uu ka careysanaa Shahid, mar danbena lama uusan hadlin.
2. Aamir Khan :- Waa wax la iska ogsoon yahay in Aamir Khan uusan shaqsi ahaan jecleyn Salman Khan. Salman ayaa sameeyay waxyaabo badan oo sharcidarro ah sida inuu ugaarsaday xaywaan mamnuuc ka ah in la ugaarsado Hindiya. Aktarka caanka ah Aamir lama shaqeyn doono waligiis Salman madaama ay yihiin labo xiddig oo tartan weyn uu ka dhaxeeyo.
3. Aishwarya Rai Bachchan :- Xiriirkii jaceyl ee ka dhaxeeyay ayaa tusaale u ah sida jaceylka uu mararka qaar isagu bedelo naceyb! Salman saa’id ayuu u jeclaa Aishwarya Rai. Laakiin ataraashiidaan ayaa uga carartay Salman Khan isla weynidiisa darteed. Salman ayaa diidanaa in xitaa ay aktaro kale la keento filimaan. Ka dib markii ay kala tageen waxay xiriir la sameysay Vivek Oberoi. Salman ayaa aad uga carooday arintaas isagoo u qaatay inay qiyaameysay. Wixii ka danbeeyay markaas cadow ayay isku noqdeen.
4. Ranbir Kapoor :- Waa magacii labaad ee liiskaan ku jira ee si lama filaan ah uga soo muuqday. Aktarka caanka ah Ranbir wax uu mar shukaansaday gabadhii uu Salman Khan saaxiibta la ahaan jiray ee Katrina Kaif. Xaqiiqda waxay aheyd in Katrina ay ka tagtay Salman Khan madaama uu si xun u la dhaqmay islamarkaana ay ka dooratay Ranbir, waana sababta uu u nacay Ranbir.
5. Vivek Oberoi :- Madaama uiu Vivek Obeoi uu shukaansaday Aishwarya xilli ay ka tagtay Salman Khan ayaa keentay inay labadaan xiddig isku dhacaan. Xitaa hanjabaad afka ah ayay bulshada dhexdeeda isku maeriyeen. Salman ayaa xitaa ugu goodiyay Vivek inuu burburin doono shaqadiisa Bollywood. Salman ayaana taas ka dhabeeyay iyadoo wixii markaas ka danbeeyay ay Vivek ku adkaatay inuu helo filimaan waa weyn uu jilo.
6. Arijit Singh :- Waxay labadaan nin isku dhaceen xilli ay socotay xaflada Star Guild Award iyadoo heesaaga Arijit Singh uu aflagaadeeyay Salman Khan. Arijit ayaa raaligeliyay Salman dhowr jeer laakiin Salman Khan ma ahan nin si sahlan wax ku cafiya. Salman marnaba ma aqbalin raaligelinta Arijit, wuxuu xitaa diiday in heestiisa caanka ah ee Sultan ay ka soo muuqato filimkiisa. Arijir ayaa baraha bulshada ku codsaday in heestiisa aan laga saarin filimka laakiin Salman Khan dheg jalaq uma siinin. Salman Khan ayaa filimaantiisa ka mamnuucay heesaha Arijir Singh.
7. Pulkit Samrat :- Pulkit wuxuu guursaday gabadha ay isla soo koreen iskuna dhintaan Salman Khan ee Shweta Rohira. Salman ayaa xitaa ka caawiyay Pulkit inuu u suuqgeeyo filimkiisii ugu horeysay. Laakiin xaalada ayaa isbedeshay markii Pulkit uu qiyaameeyay xaaskiisa isagoo xiriir la sameeyay gabadha la ciyaaro Yami Gautam. Salman ayaa si weyn u carooday markii uu Pulkit furay gabadha uu walaashiis ka yar oo kale u heystay ee Shweta. Pulkit haatan filimaan waa weyn kama helo Bollywood.
8. Arjun Kapoor :-Ma ahan wax adag in la aamino sababta uu Salman u neceb yahay Arjun Kapoor. Sababta wax kale ma ahan ee waxaa u sabab aheyd dumaashadiisii hore Malauka Arora. Dagaalka qabow ee Arjun iyo Salman wuxuu bilowday markii Malaika bilowday inay shukaansato Arjun. Salman ayaa markaas ka fogaaday Arjun wuxuuna joojiyay inuu la hadlo.
war beenta iska dhaafa salman khan iyo amir khan waa saaxiibo ee beenta dadka ka daaya ee wax la garto oo dhab ah meesha ku qora